ကော့ခ်ဘဇား ဒုက္ခသည်စခန်းတို့ ဆန်းကြယ်စွာ မကြာခဏမီးလောင်၊ စာသင်ကျောင်းများ မီးလောင်ရခြင်းမှာ ရှို့မီးကြောင့်ဟု ကုလပြောဆို။ ဒုက္ခသည်များ အမြဲတန်းနေထိုင်ရန် အိုးအိမ်သစ် ရရှိစေရမည်ဟု NGOs အချို့က ကတိပေး၍ တဲအိမ်များကို တမင်မီးရှိ့ဟု ဒေသခံတို့ဆို။ ဒုက္ခသည်များလည်း အိမ်ကောင်း အသစ်ရ၊ NGOs များလည်း အလုပ်ဖြစ် – H2Oupdatenews
ကော့ခ်ဘဇား ဒုက္ခသည်စခန်းတို့ ဆန်းကြယ်စွာ မကြာခဏမီးလောင်၊ စာသင်ကျောင်းများ မီးလောင်ရခြင်းမှာ ရှို့မီးကြောင့်ဟု ကုလပြောဆို။ ဒုက္ခသည်များ အမြဲတန်းနေထိုင်ရန် အိုးအိမ်သစ် ရရှိစေရမည်ဟု NGOs အချို့က ကတိပေး၍ တဲအိမ်များကို တမင်မီးရှိ့ဟု ဒေသခံတို့ဆို။ ဒုက္ခသည်များလည်း အိမ်ကောင်း အသစ်ရ၊ NGOs များလည်း အလုပ်ဖြစ်
oungmarine11@outlook.com 20/01/2021	No Comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကော့ခ်ဘဇားရှိ လူဦးရေထူထပ်ပြီး လူအများစုပြုံပြွတ်သိပ် နေထိုင်လျှက်ရှိရာ ဒုက္ခသည်စခန်းများသည် ယခုအခါ မီးလောင်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလာခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သည့် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရကြောင်း သက်သေပြသရာ နေရာဖြစ်လျှက်သည်ဟု ဒါကာအခြေစိုက် Dhaka Tribune က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။
နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သော အလားတူအဖြစ်အပျက်များမှာ တနင်္လာနေ့စောစောပိုင်းတွင် UNICEF ၏ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ(မူရင်းရိုဟင်ဂျာဟု ဖော်ပြ ) ကလေးငယ်များအတွက် စာသင်ကျောင်း ၄- ခုတို့လည်း မီးလောင်ပျက်စီးသွားရခြင်းဖြစ်ပြီး ရှို့မီးကြောင့် လောင်ကျွမ်းရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂကလေးများအေဂျင်စီက အခိုင်အမာ ပြောဆိုလျှက်ရှိသည်။
ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တတစ်ပတ်မပြည့်မီ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တက္ကနဖ်ရှိ နေယာပါရာ ဒုက္ခသည်စခန်း၌ လူနေတဲအိမ် ၅၀၀ ကျော်မီးလောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုဖြစ်စဉ်တွင် လူထိခိုက် သေဆုံးမှု မရှိခဲ့ချေ။
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များစွာတွင် အာဏာပိုင်များသည် မီးလောင်မှုနောက်ကွယ်ရှိအကြောင်းရင်းများကိုဖော်ပြရန် ပျက်ကွက်နေခြင်းအပေါ် မေးခွန်းထုတ်ရန်နှင့် အမျိုးမျိုး ထင်မြင်ယူဆရန် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရသည်။
ကော့ခ်ဘဇားမီးသတ်ဌာနနှင့် မြို့ပြမီးဘေးကာကွယ်ရေး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ မိုဟာမက်အဗ္ဗဒူလာကမူ မီးလောင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများကို အသေးစိတ် လေ့လာရန် မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ သို့သော် မျက်မြင်သက်သေမား အဆိုအရ ဓါတ်ငွေ့အိုးနှင့် ခြင်ဆေးခွေ မီးထွန်းရာမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မီးလောင်ဒါဏ်ရာရရှိသူဟူ၍ကား တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
မီးလောင်မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားခြင်း၏ နောက်ကွယ်၌ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများရှိကြောင်း ဒေသခံ လူထုကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများက သင်္ကာမကင်းဖြစ်ကြသည်။ စခန်းတွင်းရှိ အကူအညီပေးရေး NGOs အချို့မှာ ထိုဖြစ်စဉ်များ၏ နောက်ကွယ်၌ ရှိနေသူများဖြစ်ပြီး မတော်တဆမှု မဟုတ်ဘဲ တမင်သက်သက် လူဖန်တီးသည့် ဘေးအန္တရာယ်သာဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာစွပ်စွဲလျှက်ရှိသည်။
NGO အရာရှိများသည် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ အမြဲတန်းနေထိုင်နိုင်ရန် အိုးအိမ်သစ်များ ဆောက်လုပ်ပေးမည်ဟု ကတိပေးလျှက် စခန်းများကို တမင်မီးတင်ရှို့ကြောင်း ပယ်လမ်ခါလီရှိ “ ယူနီယံပရာရှတ် ( UP ) “ ဥက္ကဋ္ဌ ဂတ်ဖာအူဒင်ချောင်ဒရီက ပြောဆိုသည်။ ထိုနည်းဖြင့် တစ်ဖက်မှာ ဒုက္ခသည်များအတွက် ( ယာယီတဲ များနေရာတွင် ) အမြဲတမ်းနေထိုင်ရန် အိမ်များ ရရှိသွားကြပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း NGO တို့အတွင် ( အလုပ်ခွဲတမ်း ) ပိုမိုရရှိသွားသည်။ မီးလောင်မှု နောက်ကွယ်တွင် NGO တို့ ရှိနေသည်ဟု UP ဥက္ကဋ္ဌက ယုံ ကြည်သော်လည်း NGO အမည်အား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိချေ။
UP ဥက္ကဋ္ဌ၏အဆိုကို “ #ကော့ခ်ဘဇား_ချာဟတ္ထရာလိခ် “ နိုင်ငံရေးဝန်းရံသူကျောင်းသားများအဖွဲ့ ဥက္ကဌဟောင်းဖြစ်သည့် အလီမာမက်က ထောက်ခံသည်။ #ပယ်လမ်ခါလီယူနီယံတွင် တောက်လျှောက်နေထိုင်လာခဲ့သူ အလီက ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီစခန်းတို့၌ မီးလောင်မှုများဖြစ်ပွားရခြင်းတွင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများ ပတ်လည်ဝိုင်းလျှက်ရှိကြောင်း၊ အိမ်သစ်များဆောက်ရလျှင် ဘတ်ဂျက်ခွဲတမ်းရရှိမည့် NGO အချို့မှာ ၎င်းဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု လူအတော်များများက ယုံကြည်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ( အစိုးရအနေဖြင့် ) ယခုကိစ္စတစ်လုံး ကို အသေးစိတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ကြောင်း ၎င်း၏ အမြင်ကို တင်ပြသည်။
ဤအတောအတွင်း၊ နှီလာယူနီယံ၊ တက္ကနဖ်မြို့နယ်၊ နာယာပါရာ ခိုလှုံရေးစခန်းမှ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မိုဟာမက်ရာဖီးက ပြောဆိုရာတွင် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ မီးလောင်မှုမှာ ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီး တစ်ဦးနေထိုင်ရာ ယာယီတဲတစ်ခုမှ စတင်လောင်ကျွမ်းဖြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြောင်း၊ သို့သော် မီးလောင်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ဘယ်သူမှ သေချာမသိနိုင်ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပုံရသည်မှာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊
မီးလောင်ကျွမ်းသည့်အတွက် ဒုက္ခသည်တဲအိမ် ၅၀၀ ကျော် မီးထဲပါသွားခဲ့ပြီး အပျက်အစီးများအား ပြင်ဆင်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ အများစုမှာ အမိုးအကာမရှိ ကွင်းပြောင်ပြောင်တွင် ခိုလှုံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပေးရန် ဒုက္ခသည်များ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် နေရပ်ပြန်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နာ ရှားရက်ဇ်ဝမ်ဟေရတ်အား တယ်လီဖုန်းဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်သော်လည်း ဖြေကြားခြင်း မရသေးချေ။
(( လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉-ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅-ရက်နေ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ ကော့ခ်ဘဇားခရိုင်၊ အူခီယာဒုက္ခသည် စခန်း ကူတူပါလောင် မိုဒ်ချင်ဒရာ ကွင်းပြင်တွင် “ ဘင်္ဂါလီများ မြန်မာနိုင်ငံမှ အစုအပုံလိုက်ထွက်ခွာခြင်း ၂-နှစ်ပြည့် “ လူထုအစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပသည်။ ခွင့်ပြုချက် မရရှိသည့် လူထုစည်းဝေးနောက်ကွယ်တွင် ပါကစ္စတန်အခြေစိုက် #အယ်လ်ခစ်မက်ဖောင်ဒေးရှင်း Al-Khidmat Foundation က ကြိုးကိုင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းဖောင်ဒေးရှင်းသည် အယ်လ်ကိုင်ဒါဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသူဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းစာများက စွပ်စွဲရေးသားသည်။
ထို့ပြင် ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ( မောင်တောဇာတိ၊ NGO ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ) ( မိုဟီအူလာ ) မိုဟစ်ဘူလာမှာလည်း ပါကစ္စတန်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲဖော်ပြသည်။
စုံစမ်းရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ခေါင်းဆောင်များ၊ ကောလိပ်ပါမောက္ခများ၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရဒုက္ခသယ်များအကူအညီပေးရေးနှင့် နေရပ်ပြန်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး #RRRC မှ ဝန်ထမ်းများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ၏ အမည်ကို တွေ့ရှိရသည် ဟု ဘင်္ဂလားအခြေစိုက် Dhaka Tribune သတင်းစာက ရေးသားသည်။ ( Dhaka Tribune., Sept. 09 2019,” Probe report: Instigators of Rohingya mass rally in Ukhiya identified.”
ထို့ကြောင့် NGO ၂-ဖွဲ့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရက နိုင်ငံအတွင်းမှ နှင်ထုတ်ခဲ့ပြီး အခြား NGOs ပေါင်း ၄၁ – ခုတို့မှာ စည်းကမ်း မလိုက်နာမှုဖြင့် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းစေ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှ ထွက်ခွာသွားရသည်။ ” ( bnionline. September 06, 2019, 41 NGOs withdraw from Rohingya Refugee camps” ။ ။သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
#ကော့ခ်ဘဇား_ဒုက္ခသည်စခန်းတို့_ဆန်းကြယ်စွာ_မကြာခဏမီးလောင် #စာသင်ကျောင်းများ မီးလောင်ရခြင်းမှာ_ရှို့မီးကြောင့်ဟု_ကုလပြောဆို။ #ဒုက္ခသည်မျာ:အိုးအိမ်သစ်ရရှိစေရမည်ဟု_NGOs အချို့က ကတိပေး၍_တဲအိမ်များကို_တမင်မီးရှိ့ဟုဆို။
((( Dhaka Tribune., January 19 2021, “ Why are Rohingya camps going up in flames? By: Abdul Aziz, Cox’s Bazar.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆို သည်။ ယခုသတင်းပါ ဖော်ပြချက်များ၏ Dhaka Tribune က ရေးသားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၌ ဆီလျော်မှန်ကန်ကြောင်းသာ တာဝန်ယူပါသည်။ )))
Previous Previous post: လက်နက်ဒါဏ်ကာကွယ်ပစ္စည်းနှင့် လက်နက်ကိရိယာ ကြော်ငြာများကို အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း Facebook တားဆီး၊ သမ္မတသစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ဝါရှင်တန်ဒီစီနှင့် ပြည်နယ် မြို့ကြီး ၅၀ တို့၌ လက်နက်ကိုင်ကန့်ကွက်ပွဲများ ပေါ်ပေါက်နိုင်ဟု FBI သတိပေး
Next Next post: အိန္ဒိယကာကွယ်ဆေး လက်ဆောင် ၂-သန်းအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၃.၅ သန်း မနက်ဖန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရရှိမည်။ ယခုလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် နောက်ထပ် ၅-သန်း ရရှိပြီး ဖေဖော်ဝါရီတွင် နိုင်ငံသား ၆-သန်း အခမဲ့ ထိုးနှံပြီး ဖြစ်ရန်စီစဉ်။ ကာကွယ်ဆေးတိုင်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ရှိတတ်၍ သတင်းမှားများ မပြန့်နှံစေရန် မီဒီယာတို့ကို တိုက်တွန်း